Sidan ayaad ku noqonaysaa macmiil – Personlig Assistans Malmö
Mar­ka aan­nu la kula­no macmi­il cusub wax­an­nu samayn­naa sidan hoos ku qoran si aan­nu kuu baran­no kuu­na caawin kar­no sida ugu hab­boon ee aan karno:
Na soo wac si aan­nu kuu­la kulan­no
Soo wac tele­e­fan­ka 040 – 97 91 59 ama mail u soo dir kontakt@hadicare.com si ayn­nu uga bal­lan­no boo­qasho annu kuu­gu nimaad­no ama aad noo­gu timaa­did xafi­is­ka shir­kad­da kulan aan shuru­u­di ku xid­hnayn oo ayn­nu kaga wada had­layn­no baa­hi­daa­da iyo wix­ii aan­nu kuu qaban karno.
Had­dii aad na sii­sid kal­sooni­daa­da wax­an­nu kaa caawi­nayn­naa cod­si­ga kal­kaa­liye gaar ah (per­son­lig assi­stans). Taas oo ku xid­han inta aad doo­nay­sid in aad adi­gu ku lug-yee­la­tid geed­disocod­ka arrin­kaa­ga wax­an­nu kaaa caawinaynnaa:
Diy­aarin­ta waxy­aa­ba­ha cad­day­naya baahidaada.
Isku dub­ba­rid­ka qodob­ba­da loo baa­han yahay si wakaa­lad­da cay­mis­ka buls­ha­da (För­säk­rings­kas­san) ama deg­ma­daa­du u same­ey­aan baad­hitaan buuxa oo aan kaa dhan ahayn (baad­hitaan kula jira).
Xid­hi­id­h­ka hey’adaha dowlad­da iyo had­dii loo baah­do looyar (shar­ciy­aqaan aan­nu kuu qaq­ban­no) kaas oo la xid­hi­id­ha codsiga.
Arri­ma­haa­si wax­ay ku xid­ha­ny­i­hi­in baa­hi­daa­da iyo rabitaankaaga.
Ka soo­bed­de­las­ha­da shir­kad kale
Had­daad maan­ta macmi­il u tahay cid kale rab­tid­na in aad u soo ware­eg­tid Hadi­Ca­re wax­an­nu si buux­da kaa­ga caawi­nayn­naa wix­ii loo baa­ha­ny­a­hay si aad noo­gu soo wareegtid.
Had­dii cod­si­ga la ogo­laa­do
Wax­an­nu kaa caawi­nayn­naa shaqaa­la­ha iya­doo aan ka duu­layn­no rabi­taan­kaa­ga iyo baa­hi­daa­da. Wax­an­nu maammu­layn­naa arri­ma­ha dhaqaa­la­ha iyo dham­maan maamul­ka shaqaalaha.
La dedaa­lis iyo caawi­naad kale
Dad­ka macaa­mi­isha had­da noo ah wax­an­nu u fidin­naa til­maa­mis iyo caawin ku saab­san la dee­daa­lis iyo kaal­mayn sida tusaa­le ahaan kaal­ma­da dhaqaa­le ee qof­ka lax­aad­ki­i­su aanu buux­in, kaal­ma­da dary­e­e­la­ha (kaal­mo dhaqaa­le oo loo fidiyo waa­li­di­in­ta haya ilmo naa­fo ah oo da’diisu ka hoo­se­eyo 16 sano) iyo taa­ge­e­ra­da gaadhiga.